Fitsapana haingana Coronavirus, fitsapana haingana ny ra, fitsapana haingana an'ny antibiotika - HEO
OEM / ODM mpanamboatra Coronavirus Kitapo fitsapana haingana ...
Hangzhou HEO Technology Co., LTD dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana, famolavolana ary famokarana kasety fitiliana Di-Vitro Diagnostic (IVD) ary fitaovana fitsaboana hafa nandritra ny 10 taona lasa.
Nahomby izahay nanorina fifandraisana ara-barotra tena tsara amin'ny firenena 60 bebe kokoa eran'izao tontolo izao, toa an'i Azia atsimo atsinanana, Eropa, amerikanina latina, amerika atsimo, firenena afrikanina sns. Manana zavamaniry fanandramana voamarina avy amin'ny National Food and Drugs Administration sy atrikasa fanadiovana C-grade 1100 metatra toradroa. Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2011 dia nanomboka nifantoka tamin'ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fikarohana, fampandrosoana an'i In-Vitro Diagnostic Reagents izahay, ary manaraka akaiky an'i ISO13485 sy ISO9001 amin'ny rafitra fitantanana kalitao sy ny fomba famokarana rehetra izahay.
Ny kalitao tsara dia manjaka amin'ny ho avy!
Firenena maro ao amin'ny Vondrona eropeana no nanao vaksiny COVID-19
Lehilahy iray 96 taona monina ao amin'ny trano fitaizana be antitra any Espana no lasa olona voalohany nahazo vaksinina hiadiana amin'ny virus coronavirus vaovao. Rehefa avy nahazo ny tsindrona ilay lahiantitra dia nilaza fa tsy mahazo aina izy. Monica Tapias, mpiahy avy amin'ilay trano fitaizana be antitra ihany izay nanao vaksiny ...
Andro fananganana ligy
Mba hampanan-karena ny fotoana ialan'ny mpiasa, hanamaivanana ny tsindry amin'ny asany, ary hanomezana azy ireo fotoana fialan-tsasatra tanteraka aorian'ny asa, Hangzhou Hengao Technology Co., Ltd. dia nikarakara hetsika fananganana ekipa ny 30 Desambra 2020, ary mpiasa 57 an'ny ny orinasa dia nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Aft ...
Hisy fiovan'ny virus corona
Virosy Novel Corona dia notaterina tany Angletera, Afrika Atsimo ary Nizeria nanomboka ny volana desambra. Firenena maro manerantany no namaly haingana, anisan'izany ny fandrarana ny sidina avy any UK sy Afrika atsimo, raha nanambara kosa i Japon fa hampiato ny fidiran'ny vahiny manomboka ny alatsinainy teo. Araka ny ...